के हो पुनर्बिमा ? किन र कसरी गरिन्छ ? « Pahilo News
के हो पुनर्बिमा ? किन र कसरी गरिन्छ ?
प्रकाशित मिति :5February, 2020 10:51 am
काठमाडौँ,२२ माघ । पुनर्बीमा भन्नाले जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको बीमाको पनि बीमा गर्ने व्यवसाय बुझिन्छ । बीमा कम्पनीहरुले आफूले रक्षावरण गरेको बीमाको सम्पूर्ण जोखिम आफैंले बहन गर्न नसक्ने भएकोले त्यसलाई वा जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न जोखिमको हस्तान्तरण एक कम्पनीबाट अर्को कम्पनीमा गर्दछन् जसलाई पुनर्बीमा भनिन्छ ।
पुनर्बीमा गर्ने तरिका
सामान्यतया पुनर्बीमा कम्पनीहरुले सोझै ग्राहकबाट बीमा स्वीकार नगरी बीमा कम्पनीहरुबाट बीमा स्वीकार गर्दछन् । यस्तो बीमा संसारभरि सञ्जालको रुपमा फैलिएर रहेको हुन्छ, यसरी एक बीमा कम्पनीबाट अर्को पुनर्बीमा कम्पनीमा सोझै कम्पनी–कम्पनी एक आपसमा पुनर्बीमा गर्न पनि सक्दछन् भने दुवै कम्पनीहरुको बीचमा ब्रोकरको सहयोगबाट पनि पुनर्बीमा गर्न सक्दछन् । सामान्यतयाः बीमा कम्पनीहरुले पुनर्बीमा कम्पनीहरुसँग बीमा गर्दा मध्यस्थकर्ता दलालको सहयोगमा बीमा गर्दा बढी सुरक्षित हुने गर्दछ ।
नेपालमा पुनर्बिमा कम्पनीको सुरुवात
नेपालमा पुनर्बीमा कम्पनीको इतिहास धेरै लामो छैन । नेपालमा बीमा व्यवसाय शुरु भएको धेरै बर्ष भए पनि पुनर्बीमा कम्पनीको शुरुवात भएको धेरै लामो समय भएको छैन । नेपालमा पनि सशस्त्र युद्ध भयो र ठूलो द्वन्द्ध चर्कियो । नेपालमा द्वन्द्ध चर्किएपछि ठूला ठूला क्षतिहरु भए । नेपालमा भएको द्वन्द्ध र ठूला क्षतिहरु पछि विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरुले टेरोरिजम रिस्क एक्सेप्ट गर्न मानेनन् । विदेशी बीमा कम्पनीहरुले नस्वीकारेपछि नेपालमा पनि पुनर्बीमा कम्पनीको आवश्यकता महशुस भएको थियो । त्यसमाथि बैंकहरुले पनि बीमा नगरीकन फाइनान्स नगर्ने भनेपछि नेपाल सरकारको पाँच करोड र १७ वटा निर्जिवन बीमा कम्पनीको ३५/३५ लाखको दरले जम्मा ११ करोडको एउटा आकस्मिक बीमा कोष खडा गरिएको थियो । सोही कोषलाई वि.सं. २०७१ कार्तिक २० गते पाँच अर्ब चुक्तापुँजी भएको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको रुपमा विकसित गरिएको हो । हालसम्म पनि नेपालमा एउटा मात्रै पुनर्बिमा कम्पनी छ ।
बीमा ऐनमा पुनर्बीमा सम्बन्धी व्यवस्था
नेपालमा बीमा ऐन २०४९ अनुसार हरेक बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो पुँजी संरचनाको अधिकतम पाँच प्रतिशतसम्म मात्र रक्षावरण आफूले राखी बाँकी बीमांकको पुनर्बीमा गर्नुपर्ने हुन्छ । पुनर्बीमा कम्पनीहरुले बीमा कम्पनीहरुलाई ऐतिहासिक बीमा प्रिमियम र दाबीहरुको आँकडाहरुको आधारमा सुविधाहरु उपलब्ध गराउँदछन् भने बीमा कम्पनीहरुले ग्राहकले तिरेको प्रिमियम जति बीमांकको रक्षावरण आफूले गरेको छ सोही अनुपातमा आफू राख्दछ र बाँकी जुन–जुन पुनर्बीमालाई जोखिम हस्तान्तरण गर्दछ । सोही अनुपातमा प्रिमियम पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ । सोझै वा ब्रोकरको सहयोगको आधारमा हरेक आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा अगाडि बीमा कम्पनीहरु र पुनर्बीमक कम्पनीहरुको पुनर्बीमा सम्झौता गर्ने गर्दछन् । यसमा विभिन्न सेवा, शर्तहरु र सीमाहरु उल्लेख हुन्छन् । सोभन्दा बढी रकमको बीमा गर्नुपरेमा हरेक बीमांकको लागि छुट्टाछुट्टै सम्झौता पनि गर्नुपर्दछ ।